Samsung Galaxy Note 8 abịala, nke a bụ ihe ị chọrọ ịma | Akụkọ akụrụngwa
Mgbe fiasco ihe mgbawa nke Samsung Galaxy Note 7, ụlọ ọrụ South Korea kpebiri ịsachasị ihe oyiyi ọ hapụrụ n'ihu ndị na-azụ ahịaMaka nke a, o werela usoro kacha mma nke "S" na nke kacha mma nke "Cheta" iji jikọọ ya n'otu ngwaọrụ. Na nke a Samsung ezube reposition onwe ya dị ka onye mbụ na-emepụta nke ngwaọrụ ndị e mere maka arụpụta ihe.
Ma ọ bụ na ozugbo ị matara nke ọma na Samsung Galaxy Rịba ama 8 anyị enweghị obi abụọ na ị ga-ahụ ya dị ka ihe karịrị a ekwentị. Ọ bụ nnọọ ngwá ọrụ maka ọtụtụ ihe, ma anyị ga-ewepụ ha n’otu n’otu. Nabata na Samsung Galaxy Note 8.
Ma ọ bụ na site na Samsung Spain ha adịghị egbu oge ịme okwu mbụ banyere ngwaọrụ na usoro ọrụ ha ga-eji maka mgbasa ozi ha:
Anyị nwere ekele dị ukwuu maka agụụ na-enweghị atụ nke obodo Cheta. Ha bụụrụ anyị ihe na-enye ume mgbe niile ma anyị chepụtara ha ọhụụ ọhụrụ. Site na Ngosipụta Infinity, S Pen dị elu, na igwefoto abụọ dị ike, Galaxy Note8 na-enye gị ohere ịme ihe a na-echeghị na ọ ga-ekwe omume tupu oge ahụ.
1 Samsung DeX n'efu maka ịchekwa 8 Galaxy Note
2 S Pen ka mma na 8 Galaxy Note
3 Nkọwapụta nkọwapụta nke Galaxy Note 8
4 Ekike ketara n'aka Galaxy S8
Samsung DeX n'efu maka ịchekwa 8 Galaxy Note
Otu n'ime akwụkwọ akụkọ kachasị ọhụrụ anyị nwere ike ịbanye site na nyocha ahụ bụ eziokwu ahụ Ndị na-echekwa ihe nchekwa 8 Galaxy Note ha site n'aka ndị nkesa na ndị na-ere ahịa ga-enweta Samsung DeX base dị ka onyinye efu., nke e gosipụtara na mbido nke gara aga Samsung Galaxy S8, anyị na-ezo aka na ngwaọrụ ahụ nwere ike ịtụgharị Galaxy Note 8 gị na kọmpụta yana ụlọ ọrụ dị mfe nke ụfọdụ akụkụ na nyocha, nke a doro anya na ọ bụ atụmatụ na-eme ọtụtụ nke uche dị na aka na 8 Galaxy Note.
Samsung bu ụzọ webata usoro nyocha na 2011. Kemgbe ahụ, obodo nke ndị na-anụ ọkụ n'obi esitela na mmekọrita ya maka nnukwu ihuenyo na S Pen. Dabere na nyocha ahia nke Samsung, 85% nke ndị ọrụ Cheta na-ekwu na ha dị mpako igosi ihe ndetu ha ma kwado ndị enyi ha, na 75% na-ekwu na ọ bụ ihe kachasị mma smartphone na ọ nwetụla, ụfọdụ ọnụ ọgụgụ na-enweghị obi abụọ na-agba ume maka ụlọ ọrụ tara ahụhụ na anụ ahụ ọdịda ya ihe mgbawa nke Galaxy Note 7, n'agbanyeghị ịbụ ngwaọrụ a na-atụ anya nke ukwuu.
S Pen ka mma na 8 Galaxy Note
Mgbe ederede ezughị, ọrụ ahụ Ozi Ozi na-enye ohere ọhụrụ ịkọ akụkọ na igosipụta onwe gị mgbe ị na-ekwurịta okwu. N'otu aka ahụ, Samsung Galaxy Note8 na-enye anyị ohere ịkekọrịta ederede na GIF ndị animated, dabere na ụzọ anyị si hazie ya. Mana ọ bụghị naanị ọrụ iji nweta uru, Ihuenyo mgbe niile ga-enye anyị ohere ịdekọ ngwa ngwa na ihuenyo nke Samsung Galaxy Note 8 anyị n'ụzọ kachasị ọsọ, anaghịzịkwa ya iji hụ ọkwa, ụzọ dị iche iche.
S Pen mara ihe karịa, nsụgharị ka mma nke S Pen ọhụrụ na-enye gị ohere ịsụgharị ngwa ngwa naanị site na mbubataSite na mkpụrụokwu niile iji mejupụta ahịrịokwu n'ihe ruru asụsụ iri asaa na otu na mkpokọta, na-agbanwekwa nkeji na ego mba ọzọ ozugbo. Mana ndị a bụ naanị mmelite dị mma nke S Pen ga - eweta, otu ngwa ọzọ nke ndị ọrụ na - anaghị eji Galaxy Note 71 dị ka ezigbo ngwaọrụ arụ ọrụ, na - echezọ ya, n'ihi na ọ bụghị naanị ahịa ya ka ọ dị anya site na mpaghara ndị ọkachamara. , n'ihi ya nnukwu ihe ịga nke ọma.
Nkọwapụta nkọwapụta nke Galaxy Note 8
Anyị ga-aga na teknụzụ dị na ụdị nke Galaxy Note 8, ma ọtụtụ ihe ha chọrọ bụ ịmata ihe zoro n'okpuru ikpe ahụ mara mma:
Ihuenyo: Quad HD + Super AMOLED 6,3 sentimita asatọ na mkpokọta 521 ppi
Igwefoto n'azụ: 12MP obosara-akụkụ Dual OIS igwefoto na 2X telephoto oghere na 1.7 aperture
Igwe n'ihu: 8MP na oghere 1.7
Ihe nhazi: Octa isi (Quad 2,3GHz + Quad 1,7GHz) na 64 ibe n'ibe arụpụtara na 10nm
Nchekwa RAM: 6GB nke LPDDR4 RAM
Nchekwa: Site na 64GB ROM nchekwa
Batrị: 3,300 mAh na QC 2.0 ọsọ ọsọ na WPC na PMA wireless wireless
Sistemụ nrụọrụ: Android 7.1.1
Njikọta data: Nkọwa LTE 16
Njikọ ikuku: Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass na BeiDou na mgbakwunye na WiFi 802.11 abgnac.
Sensọ: Accelerometer, Barometer, Mkpịsị aka mkpịsị aka, Gyro Sensor, Ihe mmetụta Geomagnetic, Sensor Hall, Obi Pulse Sensor, Nso nso nso, RGB Light Sensor, Iris Sensor, Pressure Sensor.
Nchebe: Iris nyocha, ihu ihu na akara mkpisiaka.
A ga-agbakwunye ihe a niile wireless wireless ngwa ngwa, yana iguzogide mmiri na ájá ekele ya asambodo IP68.
Ekike ketara n'aka Galaxy S8
La 6,3-anụ ọhịa Quad HD + Super AMOLED Ngwụcha Ngosipụta -enye gị ohere ịhụ ihe na otu ilekiri na-enweghị na-eme akwụkwọ mpịakọta. Yabụ anyị ketara nhọpụta "Edge" maka akụkụ abụọ, yana ihe ndị dịka iko na 7000 aluminium niile na ngwaọrụ ahụ. O doro anya na anyị na-eche nwanne nwoke nke okenye nke Galaxy S8 ihu, ekwentị kachasị mma n'ihe gbasara imepụta nke anyị hụrụ n'afọ ndị na-adịbeghị anya.
Ugbu a na ọrụ ọhụrụ Samsung Galaxy Note8 App Mmakọ, ị nwere ike ịmepụta ngwa ngwa na Edge panel ma mepee ngwa abụọ n'otu oge, ka i wee lelee vidiyo ka ị na-eji ozi ngwa ngwa, ma ọ bụ nweta ogbako mgbe ị na-elele akwụkwọ ndekọ ekwentị ma ọ bụ nọmba ekwentị.
Ọnụ ọnụ nwere ọnụahịa mbido na Spain nke euro 1.010,33, ihe dịka 21.100 pesos Mexico ma ọ bụ dollar US 1.190 n'ọnọdụ gị. Obi abụọ adịghị ya, Galaxy Note 8 agaghị abụ ekwentị dị ọnụ ala, anyị bụ n'ezie karịa ama ama € Ihe mgbochi 1.000, Mana ndị chọrọ ịdị na-eme ọfụma ma na ejiji ma teknụzụ enweghị ike ịchọta nhọrọ ọzọ iji tinye ọtụtụ euro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Samsung Galaxy Note 8 abịala, nke a bụ ihe ị chọrọ ịma